Sidee loo sameeyaa lifaaqyo si madax-bannaan oo madax bannaan
Motoblock waa mid aan lagama maarmaan u ah beerta, waxaana lagu qalabeeyaa cutubyo kala duwan: Mashiinku wuxuu ku boodi karaa baradhada, ka saari kara baraf ama xaabo dabeed xilliga jiilaalka. Isla mar ahaantaana, liiska cutubyada ku xiran qaababka qaaliga ah ee baabuur-joojintu waxay ku koobantahay 2-3 nooc oo ah walxaha la rakibay. Maqaalkani waxaad ku baran doontaa sida loo sameynaayo lifaaqyo leh gacmihiisa iyo sida loo isticmaalo.
Motoblock - waa unug lagama maarmaan u ah beer yar iyo dacha. Baaxadda isticmaalka tiknoolajiyadaani waa mid aad u ballaaran, gaar ahaan tan soo-saarka unugyada weli ma istaagi karo, sii deynta moodooyinka cusub ee la hagaajiyay. In this article waxaan ka hadli doonaa ku saabsan Salute 100 motoblock. Salyut 100: sharaxaadda qalabka Ruushka Ruushka ee OAO GMZ Agat ee gobolka Yaroslavl, halkaas oo dhismaha baabuurta Salyut la soo saaro, bilaabay wax soo saarka unugyadan dib markii 2002.
Digriiga baradhada loogu talagalay motoblock adiga ayaa sameeya: talaabo talaabo talaabo ah
Malaha qof kasta oo ka mid ah sawir weyn ama beerta wuxuu rabaa in uu si fudud u yareeyo shaqadiisu tahay shaqooyinka dhulka oo yaraynaya wakhtiga beeraha ugu yaraan, sidaas darteed bannaanka iyo waxay u muuqdaan in ay helaan qalab socdaalka iyo qalab kala duwan. Haddii aad tahay qof leh macaamiil wanaagsan oo farsamadani faa'iido leh oo jecel in uu koro bataatooyin badan oo ku saabsan sawirkaaga, ka dibna waxay macno u tahay in laga fekero baahida loo qabo barafka baradhada mashiinka farsamada.
Astaamaha noocan oo kale ah ee loo yaqaan 'Zubr JR-Q12E Walker'.
Gole weyn ayaa kuu ogolaanaya inaad soo ururiso wax-soo-saarka wax-ku-oolka ah, laakiin sidoo kale waxaa jira cilladahooda gaarka ah. Waxay la xidhiidhaan geedi socodka qashin - waa mid aad u culus in ay gacanta ku qabato, halka sidoo kale ay tahay mid aan habooneyn in lagu kaxeeyo tareenka. Oo halkan yimaadaa isweydaarsiga gargaarka, laakiin tiknooloj wax soosaaraya. Aan aragno waxa wakiil ka ah qaybtaas waa mid la taaban karo - fiilada naaftada ee caanka ah "Bison".
Noocyada qalabka, isticmaalka iyo dayactirka dhismaha Kaskad
"Makiinad yar-yar" wajiga mashiinka dusheeda waa mid aan lagama maarmaan u ah dadka leh beeraha waaweyn. Waxaa jira noocyo iyo moodooyin badan oo suuqa ku jira oo ku kala duwan qaabaynta - xitaa unugyada u muuqda inay u wada siman yihiin waxay u baahan karaan qaybo kala duwan oo dayactir ah. Sidaa daraadeed, dad badan ayaa iibsada alaab guri, fiicneyn, faahfaahinta iyaga ku jira.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Motoblock 2020